Imbali yesikhalazo esibhengeziweyo | Iindaba zeGajethi
HUsuku lwe-15 ophumeleleyo kukhuphiswano olonyuselweyo xwenyani.com nalapho ndithathe isigqibo inxaxheba hayi ngaphandle kokuthandabuza.
Aixesha libonakalisiwe ukuba Ukhuphiswano lweGedket Kube bubuqhetseba, kulula ukuthi umntu akazange agqibe ukuwathemba la manene kodwa ndiza kubabonisa ukuba kutheni kwaye njani kule nto ingxelo yesikram esipapashiweyo.
1) Phakathi komhla we-15 nowe-17 UGedket usungula ukhuphiswano lakhe lokuphumelela i-ps3.
2) Nge-18 ndiyayazi kwaye ndigqibe kwelokuba ndibone ukuba ingantoni. Isivakalisi sokuqala endisifundileyo kwisithuba sokhuphiswano zezi zilandelayo:
"Ewe ewe, kholwa okanye hayi, oko saqala le bhulogi sonwabe kakhulu kwaye sonwabile ukuba sele siza kukhupha i-PS3"
Ngokusengqiqweni into elandelayo endiyenzayo kukubona ukuba ibhlog isebenza ixesha elingakanani kwaye iyamangalisa! Abakhange babe kwi-Intanethi kangangeenyanga ezintathu. Ndiyazibuza ngoko "Bangaphi aba tyelelo ukuze babenakho ukunika i-ps3?" kwaye impendulo kukucofa nje kube kanye.
3) Ndiyabona ukuba iphepha linekhonkco manani akho, ukuba ezi zivulekile Kwaye ndinqakraza nje omnye kude ndazi ukuba zingaphi iindwendwe esithetha ngazo. Cofa kwikhonkco kwaye umangaliswe!
Ngaphambi kokuqala ukhuphiswano babenomyinge kuphela Ukutyelela yonke imihla ngama-42.
4) Andiqondi ukuba sinokwenziwa njani isipho kunye nolo tyelelo, kodwa ndigqibe kwelokuba ndicinge ukuba bafuna ukufumana amakhonkco angenayo, bazazise kwaye mhlawumbi kubo ukunika i-ps3 ayisiyomzamo mkhulu. Inkqubo ye- Ukhuphiswano luphele nge-30 ka-Okthobha. Kwakusele iintsuku ezilishumi elinambini kuphela de ugqitywe ukhuphiswano nasemva kokubona amanani ndicinga ukuba "ukuba ndiyakwazi ukufumana ubuncinci bezithuthi, ndiyaphumelela ngokuqinisekileyo."
5) Ke ndenza inqaku lam kwaye xa ndiza kukuthumela i-imeyile yokuthatha inxaxheba ndiyaqonda ukuba batshintshe umhla wokuphela ukusuka nge-30 ka-Okthobha ukuya Novemba 15. Ngaphandle kwayo yonke into, ndigqibe kwelokuba ndithathe inxaxheba, inqaku sele lenziwe, kodwa kwi-imeyile ndiyakuxwayisa ukuba olo tshintsho luphazamisa ukuthembeka kodwa ndiyaqonda ukuba ufuna ukulibazisa kancinci ukuze ulisebenzise. Ndiphendula ngoku kulandelayo:
"… Siyayazi into esichasene nayo xa sisenza utshintsho kwinkqubo, kodwa njengoko ufundile, besingenabo abathathi-nxaxheba abaneleyo kwaye inyani kukuba iPS3 khange iphume ngexabiso eliphantsi…"
6) Emva kotshintsho lomhla kwenzeka eyona nto bendiyoyika. Njengokuba ixesha lokuthatha inxaxheba lonyukile, amathuba okungena kwindawo leyo iwebhusayithi enomthamo omkhulu wokundwendwela ukusikhupha sonke, icace gca kwaye ibiyiyo.
Iphepha levidiyo Iividiyo zeYouTube Uthatha isigqibo sokuthatha inxaxheba kwaye ngokukhawuleza aqhubeke akhokele uluhlu lwabo bathumela olona tyelelo lukhulu kukhuphiswano lweGedket.
7) Kwiintsuku ezininzi kamva ndiye ndabona ukuba ikhonkco kwi Iinkcukacha-manani zeGedket. Umntu othile uthathe isigqibo sokuba bekungekho lula ukuba nabani na akwazi ukufikelela kuzo kwaye alicime ngokulula.
Ndigqiba kwelokuba ndisuse lonke amakhonkco ebendinawo kwibhlog yokhuphiswano ngaphandle kwenqaku. Ndandingasenayo ukungazithembi kucoceko lwenkqubo.
8) Ngomhla kaNovemba 14 "iinkosi" zeGedket zathatha isigqibo rhoxisa ukhuphiswano:
"Ukhuphiswano luvaliwe ngenxa yezizathu zangaphandle kuthi, ngolwazi oluthe kratya thumela i-imeyile ku ... ngemini enye esiza kuthumela yonke idatha kunye nezizathu zokurhoxiswa, kubandakanya nomvuzo, kwabo sele bebhalisile"
Kuyabonakala ukuba ayichaphazeli ukusebenza kwebhlog, kuba kunjalo qhubeka uhlaziya yonke imihla, kumele ukuba yayikuthintela ukuzalisekisa oko kwakuthenjisiwe. Onke amathandabuzo am aqinisekisiwe kodwa kungandithatha ixesha ukufumana.
9) Nge-15 kaNovemba ka-2007, andisenawo okhuphiswano lweGedket kwaye andikukhumbuli oko namhlanje ophumeleleyo uzokwaziwa. Nge-15: 30 Ndijonga ubalo lwebhlog kwaye enye yeentambo zokukhangela indazisa ngesiphumo sokhuphiswano. Emva koko ndiye kwiwebhusayithi yeGedket kwaye ndibone ukuba ukhuphiswano luye lwarhoxiswa. Kwimizuzu nje embalwa kamva ndifumana i-imeyile evela I-Bocabit apho bandazisa khona ngobuqhetseba. Imontage iphelile.
Musa ukuya okwangoku, kukho okungakumbi !!
Nokanye wonwabile khohlisa wonke umntu Abo kuthi bafuna ukuthatha inxaxheba kukhuphiswano, abafana baseGedket batshintsha isicatshulwa esivela kwindawo yabo yokhuphiswano ngomhla we-15. Ayisatsho:
Ngemini enye siya kuthumela yonke idatha kunye nezizathu zokurhoxiswa, kubandakanya umvuzo, wabathathi-nxaxheba esele bebhalisiwe »
"Kuxelwe ukuba i-imeyile iyakuthunyelwa kubo bonke abathathi-nxaxheba ichaza izizathu kunye neendlela zembuyekezo ukuba umntu unqwenela njalo, kwisithuba esingadlulanga kwiiyure ezingama-48 ukuqala nge-13 kaNovemba."
PKwaba bantwana oku kuthetha ukuba nabani na uphelelwe lixesha lokubanga nantoni na, kuba baneeyure ezingama-48 zokwenza njalo. Kuyabonakala ukuba Ngaphandle kobuqhetseba zii-newbies kwaye ungayihoyi into efihlakeleyo Uphando kwaye le nto isibonisa njani ukuba isicatshulwa abazimisele ukukhulula kulo lonke uxanduva sele sibekiwe.
EUkuze sibenetyala lokuthemba umntu oya kubungcali aze abhale «Qalisa iseshoni» nge «c» Kwaye izolile ngokugqibeleleyo. Ukuba ukhuphiswano beluqhubekile bendiya kuliphumelela ngokuqinisekileyo Iividiyo zeYouTube ukuba ususe lonke unxibelelwano kwiGedket kwaye wasusa isithuba ebesithathe inxaxheba kukhuphiswano.
PKuyinyani, ngethemba lokuba ukhuphiswano oluququzelelwe ziividiyo zeYouTube fikelela kwizibuko elingcono. ngokubhekisele kakhulu umdiliya.
PD: Sukushiya amakhonkco kwiGedket, okanye uqhubeke ne «nofollow», ngokuqinisekileyo uGoogle uya kujonga iGedket ngamehlo ahlukeneyo xa ibona oko phulukana nazo zonke izixhumanisi ezingenayo ngequbuliso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Inkcazo yesikhalazo esichaziweyo
Izimvo ezi-38, shiya ezakho
Sele ndilususile ungeniso kunye namakhonkco. Enkosi ngesaziso sakho. Inyani yile yokuba bendiyilibele ukuba ibiyintoni namhlanje ... hehehe
Molo Assassin Vinegar, ngoku ndifunda iposti yakho, ukuba ndicima iposti yam kwibhlog yam malunga nePS3, inyani kukuba banamaqhinga, awukwazi ukuxela impatho gadalala? Ndilindele impendulo yakho, bendingazi ukuba iwebhusayithi yakho intle kakhulu.Ndiya kungena rhoqo hehe.
Ewe, luluphi ubabalo! Inyani yile yokuba wayengakhange aqonde ukuba namhlanje nge-15 kaNovemba. Ayisiyokukholelwa, zeziphi iimpazamo!
Ewe, sele bejongeka imbi phambi komntu wonke xD
Phendula ku joshua
Ndisuse nje amakhonkco, enkosi ngezimvo ozishiyileyo kwiposti yam. Inyani yile yokuba ndaluma njenge rookie, kodwa isilingo sasinkulu kakhulu…. Ngapha koko, banike i-gedket.
Sonke kufuneka sihlangane kwaye sibonise le ntswela-bulungisa nobusela.
UMarcos Mora sitsho
Enkosi ngokundazisa, inyani ukuba bekulindelekile, uyilo lwebhlog, ixesha elincinci kwi-intanethi, njl, njl. Njl. Eyona nto imbi kakhulu kukuba ibhlog yam ibiku-2. Indawo yabo bathathe inxaxheba (ngokomfanekiso wakho opapashiweyo), besikufutshane noko, kodwa sekunjalo kunokuba nzima, kunjalo. Enkosi ngokundazisa ngalo mkhonyovu. Ukubulisa.
Phendula uMarcos Mora
Besele ndiyikrokrela nayo, kodwa bendingafuni ukucinga okona kubi, kodwa namhlanje inyani ityhiliwe…. Eyona nto ndinako ukuyenza kwaye sinokuyenza kukususa iiposti ...: D, enkosi ngesilumkiso nayo ... unayo ibhlog elungileyo, ndiyakongeza kwiifidi zam 😀
Ngaba oku akuxelwa kwintengiso elahlekisayo?
Enkosi ngesilumkiso. Kwaye andithembelanga kakhulu kwithamsanqa "elihle". Uninzi lweebhlog zisebenzisa ngokunyanisekileyo eliphakathi ngenjongo "yokuhambisa" izimvo okanye ulwazi okanye nje into enomdla. Amaqhinga akhona kuzo zonke iindawo. Kodwa inqaku lakho ngalo mbandela lingaphezulu kokulungileyo, nokuba awunikeli ngaphezulu kolwazi, ndibeka kulwazi loluntu. Enkosi nokuvuyisana.
Jonga ... apha ndibalahlile
Molweni kwaye enkosi nonke ngokubeka izimvo, ndiyathemba ukuba nonke nizosusa amakhonkco enu kwiGedket ukuze olandelayo ozama ukwenza into efanayo azi ukuba alindele ntoni. Imibuliso yesidiliya.
Hee unjani, bendingakhange ndiyijonge le post.
Ewe, enyanisweni, ndiyayiqonda kwaye yayibuhlungu ngandlela ithile kuba ndandiphumelela ngenene kodwa yayiyintoni embi. Ngapha koko, ukhuphiswano lwam sele luza kuphela kwaye ndiza kubonisa ukuba ukuba kungabanjwa ukhuphiswano olunyanisekileyo, ngethamsanqa kwabo bangene kum, kwaye njengoko ubona, ndinotyelelo olulixhasayo 😉
Kubuhlungu kanjani .. kwenziwa ngabantu ..
Phendula kwi ciskod
Enkosi ngokwazisa uluntu lweblogi kolu buqhetseba. Uyisebenzile 😉
Zeziphi ii-bastard, zibhanxa abantu ngoluhlobo. Grrrr.
Khange ndithathe nxaxheba kukhuphiswano kuba andisoloko ndilubhalisela olu hlobo lwezinto, nangona bendiya kuwa njengaye wonke umntu.
Ngapha koko. Ngoku into ekufuneka uyenzile ngumonakalo onokubakho kule webhusayithi kuba ukuhleka ngoluhlobo ngokholo olulungileyo lwe-bogosfera kufuneka lube neziphumo.
Utshaba lukawonkewonke sitsho
Kwaculwa indoda, andazi ukuba uthatha inxaxheba njani kulomncintiswano. Ndiyazi ukuba i-PS3 yinto emnandi kakhulu, kodwa nceda. Ale, wonke umntu ukucima amakhonkco .. Ndiyazi ukuba abanye kuya kufuneka bashiye indawo abayithengileyo, hehe.
Phendula kuTshaba lukaRhulumente
Konwabele ukufunda isicatshulwa sakho, ngaphandle kwamathandabuzo akusayi kuphinda.
Enkosi nonke ngokusasaza ubuqhetseba, kunye namanqaku enu kunye nokushukumisa enikunike iBocabit ndicinga ukuba iindaba ziye zasasazeka kakhulu. 😉
Sele uqalile ukuqaphela iziphumo zokukhohlisa. Phambi kokuba babe malunga ne-1050 feed kwaye ngoku banokungaphantsi kwama-200.
Kubonakala ngathi uqhanqalazo lukhonza into ethile. Ngubani owaziyo esinokukwenza ngomso phakathi kwazo zonke iiBhlog?
Molo Vinegar, andifuni ukuhlala emxholweni okanye ndiqhubeke ndibeka ukubaluleka, kodwa ndifuna ukukuhalalisela ngeposti yakho, endiyifumene kakhulu
Ndiyabulela kakhulu uThe-Rocker kwaye sivuyisana ne-wiggle yakho
Imbali entle kakhulu ...
Ngethamsanqa khange ndibone ukhuphiswano, kodwa mhlawumbi ndibhalisile.
Kufuneka ulumke kwixesha elizayo.
Ingxelo egqwesileyo, iyakhanyisa kakhulu ngedatha ngokuchanekileyo njengotyelelo, ukuba andicingi ukuba ngotyelelo olungama-42, le nto inika ukunika i-PS3 ebantwini.
Siyavuyisana nophando olunzulu kunye nokubhala okumnandi.
Mna ngokwam sitsho
Uxinzelelo luhlawule, balivale iphepha!
Abaveleli, ndiyabulela ngokungazenzisiyo kutyelelo lwakho, ngalo mzuzu sinyanzelekile ukuba sivale eli phepha, ngenxa yengxaki enkulu esiyibangele kubhloga abaninzi.
Ndiyakucela ukuba uxolise kumntu ngamnye oye wathatha ixesha lokungena kweli phepha kunye nabo bonke abalawuli bethu abasebenzisanayo, ababhali, abantu ababhalisele ukutya, kwaye ngokubanzi kubo bonke abantu, ukuba kukho nayiphi na indlela yokubabhatala ngenxa yokuthembela kwabo, Qiniseka ukuba siza kukwazi.
Ukusuka eMontreal Canada, imibuliso kunye noxolo olukhulu kuwo wonke umntu.
Ewe kubonakala ngathi yonke into igqityiwe, inyani kukuba ekugqibeleni indenza buhlungu, kodwa ngekhe ubeke impumlo engaka kwaye unethemba lokuba sihlala singasebenzi.
Ubuncinci babenabo ubulumko bokuvalelisa becela uxolo, omnye umntu ngewayekhuphe ububhanxa.
Enkosi kwakhona ngokusasaza nokucebisa inqaku. Imibuliso kubo bonke.
Molo apho!! enkosi ngokunika ingxelo ngako konke oku.
Ndiyithandile ibhlog yakho.
Enkosi Paula ndiza kuyeka okwakho ukukhangela 😉
Enjani yona ilaphu!
Ndifumene nje malunga nayo yonke ikalikuni, kwaye ndiyaxolisa ukuba andiphendulanga izimvo ondishiyele zona kwibhlog. Andazi ukuba njani, kodwa ayibonwanga.
Ndiza kususa onke amakhonkco ngoku, nangona ndicinga ukuba ayizukufuneka kwakhona ...
Phendula ku-El Chavalin
Kungcono emva kwexesha kunakuqala Chavalín 😉
iiju xD zilungile ukuba andithathanga nxaxheba
Ndiyayithanda isalathiso esitsha sebhlog oyikhankanyileyo hahaha !!!
Iposti ebalaseleyo. Khange ndibandakanyeke kukhuphiswano, khange lundichaphazele ... kodwa ndifunda ingxelo oyenzileyo, ndicinga (ngokuthobekileyo) ukuba oku kuyayiphucula ibhlogosphere ethetha iSpanish ...
kuba ngaphaya kwetyala elithile olibonisayo, umgangatho womxholo kunye nomsebenzi owenziweyo ukwenza esi sithuba sihle kakhulu ...
Ndiyabulela kakhulu ngamazwi akho uJuan Pablo. Umbuliso.
Kubi kakhulu aba baqhatha, kodwa baya kuhlawula (ndiyathemba: D)
Ngendlela, kukho umfanekiso kule post othi "BUYELA" nje ukuze wazi.
PS: Ndiququzelela ukhuphiswano, nangona isipho singekho sikhulu (isidlali seMP4), ndiyakuqinisekisa ukuba xa uphumelele, ibhaso liya kuthathwa 😉
Kulungile uMartín uthathe umfanekiso, ukuba ndinexesha ndiza kuwutshintsha. Ngethamsanqa kukhuphiswano lwakho. Umbuliso.
Ndiyakugcinela umsebenzi http://todoyoung.com/images/buscadiferencias.jpg Ndiyathemba ukuba awunomsindo 😉
Utshintshe umfanekiso uMartín, enkosi kakhulu ngokungahambi kakuhle. Ngendlela, ndiyifundile imigaqo yokhuphiswano lwakho kwaye ndabona ukuba awuceli nto, kodwa ngaba uqinisekile ukuba ungayithumela naphi na? Iindleko zokuhambisa ngenqanawa zibiza kakhulu. Umbuliso.
mmmmmm… Ndicinga ukuba ndizibonakalisile kwisiza, bendithetha ukuba ndiyithumela nakweyiphi na indawo yelizwe lam (oops). Kuya kufuneka ndiyitshintshe, enkosi ngesilumkiso ... ngokubhekisele
Leliphi ikhadi lemizobo endilifakileyo? kwaye loluphi uhlobo lwekhadi lemizobo endingalifaka?